ငါ့ခွေးမှာစိုးရိမ်စိတ်ကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားရမလဲ Dogs World
အန်တိုနီယို Carretero | | လေ့ကျင့်ရေး, အထွေထွေခွေးများ
ငါ့ခွေးအတွက်စိုးရိမ်စိတ်ကိုရှောင်ရှားရန် ခွေးများသည်နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရသည့်အခြေအနေများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်ဖြစ်သည်စုံတွဲ၏လူသားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွယ်တကူလျစ်လျူရှုခံရလေ့ရှိကြသည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေး၏အချို့သောရှုထောင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ အချို့သောမေးခွန်းများကိုခွင့်ပြုခြင်းကြောင့်သူတို့ကိုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၎င်းတို့ကိုလွန်စွာဆိုးကျိုးဖြစ်စေသောနည်းဖြင့်လူသားဆန်အောင်ပြုလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာ သင့်ကိုသင်ကောင်းကောင်းမှတ်မိနိုင်မည့်အခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်သည်သင့်အားရင်ဆိုင်လိမ့်မည် ပြီးတော့မင်းရဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ဘ ၀ ကိုတိုးတက်စေမဲ့အပြုအမူအချို့ကိုအနည်းငယ်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုဝင်ပေါက်နှင့်အတူထားခဲ့ပါ; ငါ့ခွေးအတွက်စိုးရိမ်စိတ်ကိုရှောင်ရှားရန်။ မင်းကိုကြိုက်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်။
2 တိရစ္ဆာန် Humanizing
4.2 Googbye နှင့်ပိတ်
ပုံမှန်ခွေးတစ်ကောင်နှင့်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောသူတို့၏ပိုင်ရှင်များသည်တစ်နေ့တာတွင်ကျွန်ုပ်အတွက်ခွေးနှင့်နှောင်ကြိုးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည့်ပြWeနာများစွာ၏ရင်းမြစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသောပြproblemနာတစ်ခုကျွန်ုပ်ရင်ဆိုင်ရသည်။ စိတ်ကူးမရှိ (သို့) ကျွန်တော်တို့မှာရှိရင်လုံးဝမှားတယ် ...တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဆန္ဒမရှိဘဲနှင့်တစ်ခါတစ်ရံမလိုအပ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့သည်တိရိစ္ဆာန်များကို၎င်းတို့ကိုသူတို့မပြင်ဆင်ထားသောတင်းမာမှုများကိုထိမိစေသည့်အထိကြိမ်ဖန်များစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စဉ်များကိုဖန်တီးခြင်းသည်အကြိမ်များစွာတွင်ထိန်းချုပ်မှုအရှိဆုံးနှင့်အကြွင်းမဲ့ကင်းမဲ့သည့်အခြေအနေသို့ပြောင်းလဲသွားသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါကသို့မဟုတ်ခွေးတစ်ကောင်မွေးနိုင်လျှင်ပင်သံသယဝင်စေနိုင်သည်။
ငါ့ခွေးမှာစိုးရိမ်စိတ်ကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားရမယ်ဆိုတာသိဖို့မလွယ်ဘူး။ ယခင်ပို့စ်တွင် စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်တွင်ပညာပေးခြင်း - လူသားများဖြစ်ပေါ်စေသောစိတ်ဖိစီးမှု နှင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်တွင်ပညာပေးခြင်း - လူသားများဖြစ်ပေါ်စေသော II စိတ်ဖိစီးမှုငါကဒီအကြောင်းအရာအကြောင်းနည်းနည်းလေးပိုပြီးပြောမယ်။
ငါကလူသားတွေအကြောင်းပြောတော့ငါသူတို့ကိုလူလို့ရိုးရိုးလေးပဲဆက်ဆံတယ်လို့မဆိုလိုဘူး။ လူတစ် ဦး ၏ပြproblemsနာများဖြစ်သောသူတို့အတွက်နားမလည်နိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ပြandနာများကိုကျွန်ုပ်တို့လွှဲပြောင်းပေးသည်နှင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီဟုအကြိမ်များစွာ။
ပထမ ဦး စွာခွေးတစ်ကောင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သောအခြေခံလိုအပ်ချက်များရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပြလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်၎င်းလိုအပ်ချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးများ၏အတိုင်းအတာနှင့်အတူတူပင်အရေးပါမှုမရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်အလွန်အခြေခံဖြစ်သောကြောင့်သို့မဟုတ် သူတို့ကိုငါမမျှဝေဘူး၊ သူတို့ကသူတို့ဟာအတူတူပျော်ရွှင်မှုရဲ့အခြေခံဖြစ်တယ်၊ ငါသေချာပေါက်သိတဲ့တစ်ခုကတော့ခွေးရှိတဲ့လူအများစုကသူတို့ကိုပျော်ရွှင်စေချင်တယ်။
ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းပါးကိုကျွန်မခွေးနဲ့ဆက်ဆံရေးအရကျွန်ုပ်တို့ချမှတ်ခဲ့သောပါရာဒိုင်းကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားခြင်း၊ ကျွန်မတို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နဲ့ဘုံဘ ၀ မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေဘယ်လိုအကြောင်းရေးသားခြင်းကိုအာရုံစိုက်ချင်တယ်။ , ဒါပေမယ့်သူတို့ကတစ် ဦး အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
ငါတို့ခွေး၏လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့တစ်နည်းနည်းဖြင့်ဖုံးအုပ်ရမည်ဟုကျွန်ုပ်သဘောတူမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးစားလျှင်သူသည်ကျွေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးသောက်သည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ခွေးကစားမယ်ဆိုရင်ငါတို့သူ့ကိုကစားမှာဒါမှမဟုတ်ကစားစရာဒါမှမဟုတ်ကစားဖော်တွေပေးလို့ပဲ။ မင်းဒါကိုသတိထားရမယ်။ မင်းမှာရှိတာနဲ့လိုအပ်တာတွေအားလုံးကငါတို့ဆီကလာတာ။ Peter Parker ပြောသည့်အတိုင်းဤသည်အလွန်ကြီးစွာသောတာဝန်ဖြစ်သည်။
ဤတာ ၀ န်သည်ပျော်ရွှင်မှု၏ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့မည်သို့မှန်ကန်စွာနှင့်ယုတ္တိနည်းဖြင့်မည်သို့ရင်ဆိုင်ရမည်ကိုမသိလျှင်ပြproblemsနာများစွာရှိပါသည်။ ငါ့ကိုချဉ်းကပ်ရန်နားလည်ရန်အဘို့အလမ်းကိုသိရန်ဖြစ်ပါသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေး၏ဘဝနှင့်ပတ်သက်သောဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းသည်၎င်းကိုသက်ရောက်သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံအလွန်နက်ရှိုင်းစွာနှင့်ပြင်းထန်စွာ - ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသတိမပြုမိလျှင်၎င်းသည်မကုန်ဆုံးနိုင်သောထာဝရစိတ်ဖိစီးမှုအရင်းအမြစ်ဖြစ်လာသည်။ နှင့်အချိန်အများစု, ငါတို့မဟုတ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောပေါက်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိရိစ္ဆာန်များ၏ဘဝအရည်အသွေးကိုများစွာအကျိုးသက်ရောက်စေသည်၊ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုမေးကြည့်ခြင်း၊ ဘာဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်း၊ ခွေးသူငယ်ချင်းကပြtheနာကိုပေါ်ပေါက်စေပြီး၊ ငါတို့မသိဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်ပြproblemနာရဲ့အဖြေကငါတို့ဘက်မှာရှိတာကိုငါတို့မသိချင်ဘူးဆိုရင်ငါတို့ကသူဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့သူဖြစ်ရင်တိရစ္ဆာန်ကပေးတဲ့အဖြေကမကောင်းဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် အကယ်၍ ၎င်းတို့ကိုယူခြင်းသည်သင်၏သိမှတ်မှုသို့မဟုတ်သင်၏အသိဥာဏ်ကိုလက်လှမ်းမမီပါက။
ခွေးတစ်ကောင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသောက်ဖို့လိုတယ်၊ ခွေးတစ်ကောင်သည်တစ်နေ့လုံးရေချိုရရှိရန်လိုအပ်သည်။ ငါခွေးရှိရာအိမ်များကိုငါမြင်၏တစ်ရက်အဘို့ခွေးအဘို့အခွေးအလုံအလောက်ရေကိုသိုလှောင်ထားရန်ရေကွန်တိန်နာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမလုံလောကျရှိရာ။
၎င်းသည်ခွေးကိုမသေချာမရေရာမှုဖြစ်စေသည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်သူသောက်သည့်အခါသူထွက်ပြေးလိမ့်မည်၊ ၎င်းအတွက်တာဝန်ရှိသူကမဖြည့်မှီတိုင်အောင်ရေမရှိတော့ပါ၊ ဤကိစ္စတွင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည့်သူ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုင်ရှင်အားပုံမှန်အားဖြင့်မှတ်ချက်ပေးသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းတူညီသောအဖြေကိုရှာဖွေလေ့ရှိသည် - ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအခါအားလျော်စွာဖြည့်သည်။ အခါအားလျော်စွာ ... တူညီသောစကားစုကကွန်တိန်နာအချည်းနှီးဖြစ်သည့်အချိန်များရှိလိမ့်မည်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ရေငတ်လျှင်ခွေးသည်ထိုအချိန်တွင်ဘာလုပ်မလဲ။ အကယ်၍ ထိုအခြေအနေသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သောက်သုံးခြင်းနှင့်အတူပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်လာလျှင်၎င်းသည်ဆင်းရဲသောတိရစ္ဆာန်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ငါမမြင်လိုသည့်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခု - ခွေးကိုထုတ်ယူခြင်း။ ပြည်ပရှိသူတို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့် ပတ်သက်၍ လုံလောက်သောအရေးပါမှုမရှိသောအလေ့အကျင့်ရှိသောမိသားစုများကိုကျွန်ုပ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြုံတွေ့ရသည်။ ဒါဟာအပြင်မှာဟင်းလင်းပြင်ကြီးတစ်ခုကြောင့်ခွေးဟာအပြင်မှာသွားဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ယုံကြည်သူတွေကိုရှာတွေ့ဖို့လည်းပုံမှန်ပါပဲ။ အဲဒါအမှားကြီးတစ်ခုပါပဲ ထို့အပြင်သူသည်အလွန်ပေးဆပ်ရသည့်အမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။
အပြင်ထွက်မထွက်သောခွေးတစ်ကောင်သည်၎င်းင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မသက်ဆိုင်သည့်အပြင်အခြားသတ္တဝါများနှင့်အခြေခံရှုထောင့်မှဆက်သွယ်မှုမရှိသောခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ \_ t သူနဲ့နီးစပ်တဲ့သူကသူ့ကိုအခြားခွေးတွေနဲ့ကစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ခွေးတစ်ယောက်အတွက်လမ်းလျှောက်ရင်းခွေးအတွက်စိတ်အပန်းဖြေဆုံးအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်လို့မရဘူး။
ငါသည်သင်တို့ကိုsurelyကန်အမှန်အကျွမ်းတဝင်အသံအသံဥပမာတစ်ခုပေး; ငါတို့အိမ်ကိုပင်ပန်းလာတယ်၊ ငါတို့ ၅ နာရီလောက်စောင့်နေပြီး၊ ဆီးသွားချင်တယ်၊ အသည်းအသန်ထွက်ကစားတယ်၊ ဆော့ကစားချင်တယ်၊ နောက်ဆုံးမှာအနားယူချင်တဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုထုတ်ပစ်ရမယ်။ အနားယူချင်တယ်၊ ။ ကောင်းပြီ၊ အလုပ်မှလာ၊ လေ့လာရန်သို့မဟုတ်ပါတီမှလာသူများ၊ ခွေး၏လိုအပ်ချက်များကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်အောက်တွင်ထားသူများ၊ မိမိကိုယ်ကိုသက်သာစေရန်ထုတ်ယူပြီးအိမ်နံရံလေးခုအတွင်းချက်ချင်းပြန်ထည့်သည်။ ဒါကတိရစ္ဆာန်ကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်သလဲ။ ကစားခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ အနံ့ခံခြင်းသို့မဟုတ်သူ၏သိလိုစိတ်ကိုလျော့နည်းစေခြင်းစသည့်အခြေခံလိုအပ်ချက်များမလိုအပ်ဘဲစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဤလှုပ်ရှားမှုများအားလုံးသည်သူ့အားထိရောက်သောနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောနည်းလမ်းဖြင့်စီမံခန့်ခွဲရန်ကူညီခြင်းဖြစ်သည်၊ လူ့ဘောင်တွင်သူ၏ဘဝကဖြစ်ပေါ်စေသည့်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်သည်။ သူသည်နာရီနှင့်နာရီပေါင်းများစွာသော့ခတ်ထားခြင်းမရှိဘဲခရီးသွားနိုင်ရန်မည်သည့်အရာမျှမလုပ်ဘဲ၊ ဘာမျှမလုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အလားတူသက်ရောက်မှုမရှိပါ။
စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေ၊ ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်စေဖြစ်စေစိတ်ဖိစီးမှုမဖြစ်စေဘဲတစ်နေ့လုံးမလှုပ်မယှက်သောခွေးတစ်ကောင်သည်စိတ်ဖိစီးမှုမဖြစ်စေဘဲခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိလှုပ်ရှားမှုများကိုမြင့်မားသောသို့မဟုတ်မြင့်မားသောလှုပ်ရှားမှုများရှိသည့်ခွေးများထက်ပိုမိုတီထွင်ရန်ပိုမိုရည်ရွယ်သည်။ ခွေးများသည်ကစားခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောနေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်လူသစ်များနှင့် ၄ င်းတို့၏မျိုးစိတ်များ၊ အခြားနေရာများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်များနှင့်အရာဝတ္ထုအသစ်များကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းစသည်တို့ကိုသိလိုသည်။
အကယ်၍ ၎င်းကိုမှန်ကန်စွာမဖြေရှင်းနိုင်ပါက၎င်းလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်ဖုံးအုပ်ထားရမည့်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ပြaနာဖြစ်လာနိုင်သည်။ ထိုအခါငါအစားအစာနှင့်အတူစံနမူနာလိမ့်မယ်။
ကျနော့်အမြင်အရခွေးတစ်ကောင်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုအများဆုံးသောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ဥပမာတစ်ခုကငါတို့ပေးသောအစားအစာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာ၏ကျန်ရှိသောပစ္စည်းများကိုပေးမည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ငါစက်မှုအစားအစာအပေါ်အခြေခံပြီးအစားအစာကိုဆိုလိုတာ။ ဤရွေ့ကား feeds တွေကိုအများအားဖြင့်စီရီရယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ပြီးကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါဝင်မှုကိုအသားစားရန်အတွက်အကြံပြုသည်ထက်များစွာပိုမိုသည်။ ခွေးတစ်ကောင်အနေဖြင့်ခွေးဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုစနစ်တကျ metabolize လုပ်ရန်တံတွေးထဲတွင် amylase ကိုအင်ဇိုင်းမထုတ်လုပ်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အများစုကကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးပေါင်မုန့်၊ ဆန်သို့မဟုတ်ကြီးမားသောစီရီရယ်များစွာကိုနို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်နို့စားသတ္တဝါများကိုကျွေးမွေးခြင်းသည်သူတို့၏ကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးရှိသည်ဟုထင်ကြသည်။ ထိုသို့လုံးဝမှာကဲ့သို့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွနု်ပ်တို့အနေဖြင့်တိရိစ္ဆာန်များ၏အဓိကပရိုတိန်းဖြစ်သောကုန်ကြမ်းလိုင်းများသို့ကုန်ကြမ်းလိုင်းများသို့ရောက်ရှိရန်ပိုမိုလွယ်ကူ။ အကျိုးကျေးဇူးများပိုမိုရရှိစေပါသည်။ အဓိကအားဖြင့်သီးနှံပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤသည်အခြားပြanotherနာဖြစ်ပါတယ်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းသို့ ပြန်၍ မကြာခဏကျွန်ုပ်တို့သည်ခွေးကိုအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုဖြင့်ကျွေးသည်။ ပထမမှာနှစ်သိမ့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယတစ်ခုမှာပြည့်စုံသောအစားအစာဖြစ်သည်ဟုယူဆရသောကြောင့်ထုတ်လုပ်သူကသင့်ကိုပြောသည့်အရာ၊ မင်းရဲ့ VET ကမင်းကိုပြောတယ်
အဆင်ပြေရန်အကြောင်းပြချက်သည်အလွန်ထပ်တလဲလဲဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကွန်တိန်နာမှစက်မှုအစာကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ပိုမိုလွယ်ကူ။ ပိုမိုမြန်ဆန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ VET ကဘယ်လိုအကြံပေးသလဲဆိုတဲ့ပြthereနာရှိနေတယ်။ သို့ရာတွင်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်အစားအသားကိုစားပြီးအသားကိုစားရမည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကပြောကြားသည်မှာအခြေခံကျသောယုတ္တိဗေဒနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ သို့သော်တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်များခွေးတစ်ကောင်အစာအာဟာရအတွက်ရရှိသောလေ့ကျင့်မှုသည်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသက်တမ်း (၃) နှစ်အတွင်းလက်တွေ့ကျသည်။ ဒါဟာအချိန်ကိစ္စအဘို့ဖြစ်၏။ ၎င်းတို့သည်ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများ၊ ငှက်များ၊
ဒါကြောင့်သူတို့ဟာဒီလေ့ကျင့်ရေးကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေကျွေးမွေးတဲ့အာဟာရညီလာခံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကနေရလေ့ရှိတယ်။ ထို့အပြင်မည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်း၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပတ်သက်၍ မပြောရန်အစားအစာကွန်ဂရက်ကိုမည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်မှစီစဉ်မည်မဟုတ်ဟုစဉ်းစားခြင်းသည်ယုတ္တိရှိသည်။ ယုတ္တိရှိတယ်
ဤနည်းအားဖြင့်တိရိစ္ဆာန်ဆရာများသည်သတင်းအချက်အလက်မှ လွဲ၍ ၎င်းအမှတ်တံဆိပ်များကိုသူတို့၏အနာဂတ်ဆေးကုသရေးဆေးခန်းတွင်မည်သို့ရောင်းချရမည်ကိုအဆက်အသွယ်များရရှိကြသည်။ ၎င်းသည်ခွေးများဖြင့်အရေပြား၊ နှလုံး၊ အစာအိမ်ပြproblemsနာများနှင့်ပြည့်နှက်လိမ့်မည်။ ဒီနောက်ထပ်ပြissueနာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စရဲ့အဓိကအချက်ကိုလေ့လာကြပါစို့။
လူအများကအန်တိုနီယိုကို၊ ငါ့ခွေးကိုဘာကြောင့်စိုးရိမ်တာလဲ။ ငါကအမြဲတမ်းအဖြေပေးတယ်။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏တိရိစ္ဆာန်ဆရာများ၏ထောက်ခံချက်အရဖြစ်စေသီးနှံများကိုအခြေခံသည့်စက်မှုအစာဖြင့်ခွေးတစ်ကောင်ကိုကျွေးမွေးသည့်အခါ၎င်းသည်အစားအသောက်အမျိုးမျိုးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရဓာတ်များကိုငြင်းဆန်နေပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်၏ဘဝအဘို့။
ခွေးများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ဘ ၀ အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ် ၂၂ လုံးလိုအပ်သည်။ သူကိုယ်တိုင်သည်သူ၏အသည်းမှတစ်ဆင့်အမိုင်နိုအက်ဆစ် ၁၂ ခုကိုထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသော်လည်း၎င်းတို့အနက်မှ ၁၀ ခုကိုသူ၏အစားအစာမှရရှိသည်။ ထို့အပြင် taurine၊ lysine, arginine သို့မဟုတ် threonine ကဲ့သို့သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များကိုအပင်ပရိုတိန်းများ၏အမိုင်နိုအက်ဆစ်ချည်နှောင်မှုတွင်မတွေ့ရပါ။ ထို့ကြောင့်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ခွေးသည်အစာ၊ အသား၊ ငါး ​​(သို့) ကြက်ဥလိုအပ်သည်ကိုသိရှိနိုင်ပြီး၎င်းသည်အသက်ရှင်ရန်လိုအပ်သည်။
ကြီးမြတ်၏စာအုပ်မှ ကားလို့စ်အယ်လ်ဘာတိုဂူတီယာရက်စ်, သင့်ခွေး၏အဟာရနှင့် ပတ်သက်၍ တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်၊ အာဟာရဗေဒပညာရှင်၊
ယေဘုယျအားဖြင့်ခွေးကလိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ် ၂၂ မျိုးရှိသည်။ အမိုင်နိုအက်ဆစ် ၂၂ ခုအနက်မှ ၁၂ ကိုခွေး (အသည်းအတွင်း၌) ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ကျန် ၁၀ ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ပြင်ပအရင်းအမြစ်ဖြစ်သောအစားအစာဖြစ်သည်။ ဤအမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအသုံးအနှုန်းအောက်တွင်လူသိများသည်။
အရေးမပါအမိုင်နိုအက်ဆစ်များ အမိုင်နိုအက်ဆစ်များကိုခန္ဓာကိုယ်ကဖန်တီးနိုင်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကသူတို့ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ကတည်းကမျှ သူတို့အစားအသောက်ထဲမှာပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များ - မဟုတ်ပါ ခန္ဓာကိုယ်ကထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်နှင့်
သူတို့ကအစာမှလာရပေမည်။ ဤမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ် (၁၀) ခုစီ၏ဤအတိုချုပ်ဖော်ပြချက်ကိုကြည့်ပါ။ ထို့ကြောင့်အရည်အသွေးရှိသောတိရိစ္ဆာန်ပရိုတိန်းများပံ့ပိုးပေးခြင်း၏အရေးပါမှုမှာ -
ARGININE: ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည် ကြီးထွားဟော်မုန်းများနှင့်
HISTIDINE: histamine ကိုထုတ်လွှတ်သည်၊ နာကျင်မှုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်
ISOLEUCIN နှင့် LEUCINE: ဗာလင်နာကိုကြည့်ပါ။
METHIONINE: အူအတွင်းရှိသည်ဆီးအိမ်ကိုကူညီသည် အသည်းတွင်းရှိအဆီဓာတ်များကိုကာကွယ်ပေးသည်၊ ဆီးလမ်းကြောင်း၏ pH ကိုဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းပေးပြီး taurine ကိုသွင်းသည်။
PHENYLALANINE: ဆက်စပ်မှုရှိတယ် အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဖိအားတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ဓာတ်သတ္တုများနှင့်အတူဆံပင်အရောင်ခြယ်ခြင်းအပေါ်ပြုမူသည် နှင့်အရေပြား adrenaline နှင့် noradrenaline ထုတ်လုပ်သည်။
TREONINE - စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုကိုထိန်းညှိသည်။ စိတ်ဓါတ်နှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုအပြုသဘောပြုသည်၊ adrenaline ကိုထုတ်လုပ်သည်၊ ၎င်းသည်ရှေ့ပြေးဖြစ်သည် သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း။
TRYPTOPHAN - အိပ်စက်ခြင်းကိုအားပေးတဲ့ serotonin ကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်။
ခွေးသည်လူ့အသိုင်းအ ၀ ိုင်းနှင့်အပြည့်အဝပေါင်းစည်းထားသော်လည်းလူသားတို့နှင့်မတူပါ။ ဤသည်သည်အရည်အသွေးနိမ့်သောကုန်ကြမ်းများမှရရှိသောစက်မှုအစာများအပေါ် အခြေခံ၍ အစားအစာများကိုပြုလုပ်သည်။ (သင်မစားလိုသည့်အလွန်ဆိုးရွားသည်) ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများမှသည်အစားအစာပတ် ၀ န်းကျင်မှဖိစီးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နားမလည်နိုင်သည့်အပြင်ဖြေရှင်းရန်မတတ်နိုင်သည့်များပြားလှသော compulsive သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများဖြင့်ခွေး။
ခွေးကဒီဘဝမှာအရာအားလုံးကိုငါတို့ဆီကရတယ်။ အကယ်၍ သူထွက်သွားလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကိုထုတ်ပစ်လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်၊ သူသောက်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကိုရေပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူစားလျှင်ကျွေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူ့အစားအစာတွင်ချို့တဲ့နေပါက၎င်းသည်သူမတတ်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုပြင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ သို့သော်သူသည်ထိုဝေဒနာကိုခံစားနေရသည်။
ငါတို့ခွေးမှာကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေတာကိုသတိထားဖို့ကြိုးစားရမယ်။ ငါတို့သူ့ကိုစားစရာတစ်ခုခုပေးတာ၊ ရေတစ်နေ့ကိုမိနစ် ၂၀ လောက်ထုတ်ယူလိုက်လို့သူပျော်သွားမှာကိုမယုံဘူး။ သင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းမပေးပါ။ သူကအရာဝတ္ထုတွေကိုရှင်သန်နေတဲ့နေရာကနေကြည့်ကြရအောင်၊ ဒါဆိုတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကိုလူသားတစ်မျိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်လိုက်တာနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အဲဒါဟာဒီလိုမျိုးရှင်သန်သင့်တယ်။ တဖန်သင်တို့ကျရှုံးခွင့်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှားအမှန်၊ ကျရှုံးရန်အခွင့်အရေးကိုအကြိမ်များစွာဖယ်ရှားပေးပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အိမ်မှထွက်ခွာပြီးသူ့ကိုတစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ပါကသင်၏ခွေးသည်အရာရာကိုဖျက်ဆီးပါကသူနှင့်သင်နှင့်သင်၏လူကိုလက်စားချေလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းသူသည်လိုအပ်ချက်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ သင်နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေနှင့်လူ့လမ်းညွှန်အနေဖြင့်သင်သတိထားရမည်။ အခြေအနေ
သူတို့လိုအပ်တာတွေကိုသတိထားဖို့လိုတယ်၊ ဒါမှသူတို့ဟာစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိုးရိမ်မှုရဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ဤအရာသည်ခွေးထဲတွင်စိုးရိမ်စိတ်ကိုမည်သို့ရှောင်ရှားနိုင်သနည်း။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အိမ်၌တစ်နေ့လျှင် ၂၃ နာရီပိတ်ထားသောခွေးတစ်ကောင်ရှိလျှင်၊ အခြားတိရစ္ဆာန်များနှင့်မပတ်သက်ဘဲ၊ ကစားခြင်း၊ အပြင်ထွက်ခြင်းနှင့်နှာခေါင်း ၀ တ်ဆင်ခြင်းတို့မရှိဘဲဈေးပေါသောအစားအစာများကိုစားသည်ဆိုပါက၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ဟုမမျှော်လင့်သင့်ပါ ပျော်တယ် ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ချစ်သူတို့၊.
ငါ့ခွေးအတွက်စိုးရိမ်စိတ်ကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားရမလဲဆိုတာလွယ်ကူတယ်။ သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့် သင့်ခွေး၏လိုအပ်ချက်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး၎င်းအားပေးပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ပိုမိုအဓိပ္ပာယ်တူထပ်တူအဓိပ္ပါယ်မရှိပါ
နောက်ထပ် ado မရှိရင်, ဒီလိုင်းများကိုသင်ရောင်ပြန်ဟပ်ကူညီနိုင်မျှော်လင့်ပါတယ်။
နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနှင့် အကယ်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်စိုးရိမ်မှုများရှိပါကဤစာမူ၏မှတ်ချက်များတွင်ထားပါ။ သင်၏ခွေးများကိုဂရုစိုက်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » လေ့ကျင့်ရေး » ငါ့ခွေးအတွက်စိုးရိမ်စိတ်ကိုရှောင်ရှားရန်
ဒီတော့မင်းရဲ့စကားအရ၊ အရာရာကိုချိုးဖျက်နိုင်တဲ့ခွေးတစ်ကောင်ဟာစိတ်ဖိစီးမှုဒါမှမဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်ကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့ခံစားနေရတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်တယ်။ သူငါ့ကိုပြောဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ ငါ့အရွယ်ရောက်သူ Dalmatian ဟာစွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုအခြေအနေကနေမွေးစားပြီးကယ်တင်ခြင်းခံရတယ်၊ အိပ်ချိန်ရောက်တဲ့အခါတစ်ယောက်တည်းအိပ်ယာ ၀ င်သွားတယ်။ အပြင်ထွက်ဖို့၊ ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ် ၅ မိနစ်ထက်ပိုပြီးမယူဖို့တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဟင်းလင်းပြင်ကိုထွက်သွားနိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ခွေးတစ်ကောင်ကိုတစ်နေ့လျှင် ၄ ကြိမ်ထုတ်ယူခဲ့ပြီးအပူချိန် ၁၅ မိနစ် ၂၀ မိနစ်အလယ်ဗဟိုလမ်းလျှောက်ခြင်းမှအပ။ ပထမနှင့်နောက်ဆုံးသည်အရာများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်၊ အရာရာကိုအနံ့နှင့်အခြားခွေးများနှင့်အတူပျော်မွေ့ရန်လမ်းလျှောက်ခြင်းပင်ဖြစ်သော်လည်း ဆက်လက်၍ သူမကဆက်လက်ပြောကြားသည်။ သူမစိတ်ဖိစီးမှုခံရတာ၊ ဘာကြောင့်သူမခဏတာချိုးဖောက်တာလဲ ?????????
အန်တိုနီယို Carretero ဟုသူကပြောသည်
တိကျတဲ့နည်းစနစ်တစ်မျိုးမျိုးကိုအကြံပေးခြင်း (သို့) တိရိစ္ဆာန်နှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမျှမသိဘဲ၊ မျဉ်းကြောင်း ၈ ခုမှ ၁၀ ချက်သာလျှင်ဘာမှမသိဘဲဘာလုပ်ရမည်ကိုအကြံဥာဏ်ပေးရန်အလွန်အန္တရာယ်များသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ပြyouနာပိုများလာနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်ကြောက်လန့်ခြင်းနှင့်စိတ်ပျက်စရာပြproblemနာရှိသောခွေးတစ်ကောင်၌သင်သူ့ကိုသင်ဖော်ပြသူများကို sniffing session တစ်ခုပေးလျှင်၊ အလုံခြုံဆုံးအရာမှာခွေးသည်စိတ်ဖိစီးမှုသို့ရောက်ရှိပြီး၎င်းကိုကိုင်တွယ်ရန်နည်းလမ်းအချို့လိုအပ်ပါကဤတစ်ကြိမ်တွင်သူသည်လုပ်လိမ့်မည်။ သူတို့ကစားပွဲတစ်ခုအဖြစ်စားစရာကျန်ခဲ့သည့်နေရာအားလုံးမဟုတ်လျှင်အိပ်ရာကိုကိုက်ရုံသာမဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့သင်ဟာဒီအရာတွေကိုအရမ်းဂရုစိုက်ဖို့လိုပြီးခွေးရဲ့ဘဝအရည်အသွေးတိုးတက်ဖို့ရည်မှန်းချက်ပြည့်မီဖို့အတွက်အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုမလိုအပ်ဘဲမည်သည့်နည်းနဲ့မဆိုကူညီလိုတဲ့သူတွေကိုလှည့်ဖြားမထားသင့်ဘူး ဝက် (ဘ်) ဆိုဒ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကြံဥာဏ်သည်ရိုးရှင်းသည့်အတွက်၎င်းသည်လူသား၏လမ်းညွှန်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သက်ရှိသတ္တဝါအတွက်ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်၊ သူသည်သူ၏အရိုးများကို kennel တွင်း၌တွေ့ရသည်။
Antonio Carretero အားပြန်ပြောပါ
မော်နီကာ Sanchez ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ သူတို့ကမတူညီတဲ့ရာထူးနှစ်ခုပဲ။ အဲဒါကိုလှည့်စားမခံသင့်ဘူးဆိုတာငါသဘောတူတယ်၊ ငါပြောနိုင်တာကငါ့ကိုယ်ပိုင်ခွေးတွေနဲ့တခြားသူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တာကြောင့်ဒီ sniffing ကသူတို့ကိုပိုပြီးစိတ်အေးလက်အေးဖြစ်အောင်ကူညီပေးတယ်။ သူတို့သည်ကြောက်ရွံ့မှုသို့မဟုတ်မလုံခြုံမှုခံစားရလျှင်ပင်။
ငါသဘောတူမယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူး။ olfactory လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းသည်ခွေးများအတွက်အလွန်အကျိုးရှိသည်။ သို့ရာတွင်၊ ဤလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားကိုသင်ကြားမှု / သင်ယူမှု၏အစတွင်သို့မဟုတ်သင်စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချရန်ကြိုးစားပါကဤလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားကိုလက်မခံသောအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါဗေဒအချို့ရှိသည်။
ယုတ္တိရှိသောအသံတစ်ခုခုကိုအကြံပြုရန်လွယ်ကူသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်လေ့ကျင့်ခန်း (သို့) နည်းစနစ်သာမကသင်မိတ်ဆက်ပေးသောအခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေခြင်း (သို့) အမူအကျင့်များကိုပြုပြင်ခြင်းတွင်အောင်မြင်မှုရစေသည်။ ဒါကငါအထင်အမြင်လွဲစေခြင်းဖြင့်ဆိုလိုတာက။
စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည့်ခွေးတစ်ကောင်သည်သူအားစိတ်ဖိစီးမှုမဖြစ်စေရန်အိမ်ပတ်ပတ်လည်တွင်စည်သွပ်မထားပါနှင့်။ ငါဆိုသည်ကားငါ Ethologist ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ငါနှစ်ပေါင်းများစွာပညာရှင်ပီသစွာခွေးပညာပေးခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့်သင်အကြံပေးသည့်အခါသတိထားပါ။
ပြီးတော့အရေးကြီးတာကထင်မြင်ချက်က၎င်းကိုထောက်ခံသည့်အငြင်းအခုံကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။ ခွေးတွေကိုလျှပ်စစ်ကော်လာနဲ့လေ့ကျင့်ပေးနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုငါသိတယ်။ သူတို့မှာသူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ရှိတယ်၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ Ethology လေ့လာချက်များအရဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်။
ပြီးတော့မှတ်ချက်ကိုမဖျက်ပါနဲ့။ ကောင်းပါတယ် ဒါဟာကျရှုံးနိုင်ပါတယ်နှင့်ဘာမျှမဖြစ်ပျက်။
သငျသညျဟုတ်ကဲ့, အရာအားလုံးကနေလေ့လာသင်ယူ။ 🙂
လျှပ်စစ်ကော်လာများ၊ လည်ပင်းညှစ်။ အရာရာကိုပညာပေးသူများသည်အထည်များဖြင့် ...
ငါလျှပ်စစ်သို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ကော်လာဆန့်ကျင်။ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ငန်းနည်းစနစ်များသည်ဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောအေးစက်ခြင်းနှင့် Clicker မော်ဒယ်လ်နည်းစနစ်များဖြင့်တန်ပြန်အေးစက်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကျောင်းသားများနှင့်ကျွန်ုပ်၏ခွေးများသည်ချောင်ချောင်နေပြီး (သို့) Easy-Walker နှင့်ပါ။